အီရန်က အမေရိကန်နှင့် စစ်ခင်းရန် ကြိုးပမ်းခြင်း မရှိဟု ခါမေနီပြော - Yangon Media Group
အီရန်က အမေရိကန်နှင့် စစ်ခင်းရန် ကြိုးပမ်းခြင်း မရှိဟု ခါမေနီပြော
အီရန်နိုင်ငံ၏ အခေါင်အချုပ်ခေါင်း ဆောင် အယာတိုလာခါမေနီက အီရန်နိုင်ငံ အနေနှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုနှင့် စစ်ခင်းရန် ကြိုးပမ်းမည်မဟုတ်ကြောင်း ပြော ကြားခဲ့သည်။ အီရန်နှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု တို့၏ ဆက်ဆံရေးတင်းမာမှု အရှိန်မြှင့်တက် လာသည့် အခြေအနေတွင် မစ္စတာခါမေနီ က ယခုကဲ့သို့ ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
မကြာသေးမီက အရှေ့အလယ်ပိုင်းတွင် အီရန် သို့မဟုတ် အီရန်နိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြု သူတို့က ခြိမ်းခြောက်နေဖွယ်ရှိသည်ဆိုခြင်း ကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် ထရန့်အစိုးရအဖွဲ့ က လေယာဉ်တင်တိုက်ခိုက်ရေး သင်္ဘော အုပ်စုနှင့် ဘီ-၅၂ ဗုံးကြဲလေယာဉ်များကို အရှေ့အလယ်ပိုင်းသို့ စေလွှတ်ခဲ့သည်။
ပြီးခဲ့သည့်အင်္ဂါနေ့က တွစ်တာပေါ်မှ နေ၍ မစ္စတာခါမေနီက ပြောကြားရာတွင် အီရန်နိုင်ငံက ဝါရှင်တန်၏ ပြုမူဆောင်ရွက်မှုအပေါ် ဆန့်ကျင်ခုခံရေးကိုသာ ရွေးချယ်ထား ကြောင်း၊ သို့ရာတွင် တီဟီရန်အစိုးရအနေနှင့် လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခဖြစ်ပွားမှုကို ရှောင်လွှဲ ရန်မျှော်လင့်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ ထိုအတောအတွင်း အီရန်နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး မိုဟာမက်ဂျာဗတ်ဇာရစ်က အမေရိ ကန်ပြည်ထောင်စုက မလိုလားအပ်သော အခြေအနေများကို တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်လျက် ရှိကြောင်း စွပ်စွဲပြောကြားခဲ့သည်။
Ref: NHK , RTE
ဆော်ဒီရေနံပိုက်လိုင်း ဒရုန်းများဖြင့် တိုက်ခိုက်ခံရ
နေပူပြင်းနေ၍ မုံရွာမြို့ရှိ စာသင်ကျောင်းများ စာသင်ချိန်ပြောင်းလဲ သင်ကြားရန် ညွှန်ကြား
အများပြည်သူ ကျန်းမာရေးအတွက် ခေတ်မီ သုတေသန ရလဒ်များမှ ကုထုံးနည်းပညာနှင့် ထိရောက်သော ဆေးဝါး??
လမ်းကြမ်းစီးဆိုင်ကယ်ပြိုင်ပွဲကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် မန္တလေးမြို့ နေကာေ??
ကာဗာဂျယ်နှင့် အစ္စကိုတို့ကို အရဲစွန့်သုံးရန် အသင်းနည်းပြ ဇီဒန်း ငြင်းဆန်